ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ဘတ်(စ်) ကားတစ်စီးကုန်တင်ရထားနှင့်တိုက်မိ သေဆုံးသည့် ၁၈ ဦးထဲတွင် မြန်မာအလုပ်သမား ၆ ဦးပါဝင် - Yangon Nation News
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ဘတ်(စ်) ကားတစ်စီးကုန်တင်ရထားနှင့်တိုက်မိ သေဆုံးသည့် ၁၈ ဦးထဲတွင် မြန်မာအလုပ်သမား ၆ ဦးပါဝင်
ထိုင်းနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်း ချချင်းစောင်း ခရိုင်တွင် ဘတ်(စ်) ကားတစ်စီးကုန်တင်ရထားနှင့်တိုက်မိ သေဆုံးသည့် 18 ဦးထဲတွင် မြန်မာအလုပ်သမား6ဦးပါဝင်
ထိုင်းနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်း ချချင်းစောင်းခရိုင် တွင် စမွတ်ပရကန်ခရိုင်မှစက်ရုံအလုပ်သမားများတင်ဆောင်လာသောဘတ်စ်ကားတစ်စီးသည် အရှိန်ဖြင့်လာနေသောမီးရထားတစ်စင်းနှင့်ခေါင်းချင်းကန့်လန့်ဖြတ်တိုက်မိပြီးဘတ်စ်ကားမှာညာဘက်သို့လဲကျတိမ်းမှောက်သွားခဲ့ပါသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ 11.10.2020 တွင် စမွတ်ပရကန်ခရိုင် မှ စက်ရုံအလုပ်သမားများသည် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်နေကျဖြစ်သောဝါကျွတ်ကထိန်ပွဲအတွက် တစ်ဦးလျင် 100 ဘတ်နှုန်းထည့်ဝင်ကာစုပေါင်းပဒေသာပင်သီကြပြီး တစ်ဦးလျင် 300 ဘတ်နှုန်းထည့်ဝင်ကာဘတ်(စ်)တစ်စီးကိုစုပေါင်းငှားခဲ့ကြကာ နံနက်အာရုဏ်ဦးမတက်မီစမွတ်ပရကန်ခရိုင်မှ ဗန်ကောက်အောက်ဘက်လမ်းကြောင်းဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံအရှေ့ဘက် ဗန်ကောက်မြို့မှကီလိုမီတာ 200 ကျော်အကွာအဝေးတွင်ရှိသော ချချင်းစောင်းခရိုင်သို့ထွက်ခွာခဲ့ကြပါသည်။
၎င်းခရီးစဉ်တွင် လိုက်ပါသူစုစုပေါင်း 64 ဦးရှိပြီး ကားပေါ်တွင်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ဖြစ်စေရန် DJ တစ်ဦးကိုလည်းငှားရမ်းလိုက်ပါဖျော်ဖြေစေခဲ့ပါသည်။ အခင်းဖြစ်ပွားသောနေရာသည် နောက်2ကီလိုမီတာထပ်မောင်းလျင်လှူဒါန်းမည့်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသို့ရောက်ရှိတော့မည့် ရထားလမ်းဖြတ် ကားလမ်းသွယ်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းနေရာတွင် ရထားဂိတ်မောင်းတံမရှိပဲ အချက်ပြမီးသာလျင်ရှိပါသည်၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးပင်လယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်း၊လန်ချဘန် မှ ထွက်ခွာလာသော ကုန်တင်မီးရထားသည်5ကြိမ်တိုင် အချက်ရှည်ဥသြဆွဲ အသံပေးခဲ့သော်လည်း ဘတ်(စ်)ကားပေါ်တွင် အလွန်ကျယ်လောင်သောသီချင်းသံဖြင့်ကခုန်နေကြသောကြောင့်မီးရထားဥသြသံမကြားရသည်ကတစ်ကြောင်း၊ မိုးဖွဲဖွဲရွာ၍အမြင်မကြည်လင်သည်ကတစ်ကြောင်း၊ မီးရထားလမ်းမဖြတ်ခင်ကားလမ်းတွင်သစ်ပင်ချုံနွယ်များပိတ်နေသဖြင့်ရထားလာသည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်ရသည်ကတစ်ကြောင်းတို့‌ကြောင့် အရှိန်ဖြင်လာနေသောမီးရထားနှင့် ဘတ်(စ်)ကားတို့သည်ခေါင်းချင်းကန့်လန့်ဖြတ်အနေအထားဖြင့်တိုက်မိကာ ဘတ်(စ်)ကားသည်ညာဘက်သို့တိမ်းကာဘေးတိုက်မှောက်သွားခဲ့ပါသည်။
၎င်းဖြစ်စဉ်၌ လိုက်ပါလာသူများအနက် ဘတ်(စ်)ကားဦးပိုင်းနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်လိုက်ပါလာကြသူများထဲမှ 18 ဦးသေဆုံးပြီး 32 ဦးပြင်းထန်စွာဒါဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး4ဦးမှာဒါဏ်ရာအနည်းငယ်ရရှိခဲ့ပါသည်။ ကားအလယ်ပိုင်းတွင်လိုက်ပါလာသူများမပြင်ထန်သောဒါဏ်ရာများရခဲ့ကြပါသည်။
ထိုသေဆုံးသူ 18 ဦးထဲတွင်3ဦးမှာယခုအထိမည်သူမည်ဝါခွဲခြား၍မရသေးပါ၊သေဆုံးသူများထဲတွင် မြန်မာအလုပ်သမား6ဦးပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ အချို့မှာ ဦး‌ခေါင်းများပြုတ်ထွက်သွားခြင်း၊ လက်များခြေထောက်များပြုထွက်သွားခြင်းများ၊ ခန္ဓာကိုအစိတ်အပိုင်းများတစ်စစီပြန့်ကျဲနေသဖြင့်မည်သူ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်ကိုသက်ဆိုင်ရာမှစီစစ်နေဆဲဖြစ်ပါသည်။
1. Win Ko Latt အသက် 29 နှစ်
2. NAN KHUU LU
3. Kyaw Swar
4. Win Ko Ko
6. Kla အမည်ရင်းစီစစ်ဆဲ
အလောင်းပြန်လည်သယ်ဆောင်ခြင်းနှင့်သင်္ဂြိုရန် ဖုန်း – 038511410 ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
1. Mr.MYO LWIN
2. Miss. SHA HONMARMYTNI
3. Miss . PAN CHEY PHYE
– အိမ်သို့ပြန်ခွင့်ရသူစုစုပေါင်း 14 ဦးရှိပါသည်။
(မှတ်ချက် – ထိုင်းနိုင်ငံတွင် 1.10.2020 နေ့တွင်ဝါတွင်း3လပြည့်မြောက်ပြီးသီတင်းကျွတ်ကထိန်ရာသီသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါသည်။)
သတင်းစဉ် – AKM Tourism
ကိုးကား – https://www.thairath.co.th/news/local/central/1950195
#credit Chit Moe